Ahoana ny fametrahana macOS Mojave amin'ny Mac "tsy tohanana" Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fametrahana macOS Mojave amin'ny Mac "tsy manohana"
Misy fomba fametrahana macOS Mojave amin'ireo solosaina ireo izay tsy havaozin'i Apple amin'ny fomba ofisialy ary anio izao no tena ho hitantsika. Amin'ity tranga ity, ny zava-dehibe dia tokony hazava fa dingana somary sarotra izy io ary tsy ho tsotra toy ny hoe navelan'i Apple hametraka ireo Mac tsy misy tohananay izy.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny mpamorona namorona ny fitaovany manokana ahafahantsika manao fametrahana sarotra kokoa, nefa miaraka aminy aza Tsy dingana tsotra io ary mitaky ny dianao. Fitaovana iray hanavaozana ny patches antsoina hoe Patch Updater no ampiana ihany koa, zavatra ankasitrahana amin'ireto tranga ireto.
Ao amin'ity horonantsary an'ny dosdude1 afaka jerentsika amin'ny fomba tsotra ao anatin'ny antsasak'adiny fotsiny ny fizotrany. Ho an'ny fametrahana macOS Mojave dia ilaina ny andiana fitakiana ilaozanay aorian'ilay horonantsary ary mazava ho azy ny patch namboarin'i dosdude1 ho an'ny fametrahana izay mitaky installer USB 16GB. Ho hitantsika amin'ny famaritana ny horonan-tsary izany rehetra izany ary avelantsika eo ambanin'ilay horonan-tsary koa izy ireo.
Mac Pro, iMac, na MacBook Pro 2008 mandroso
MacBook Air na MacBook Unibody aliminioma faramparan'ny 2008 na taty aoriana
White Mac Mini na MacBook tamin'ny voalohan'ny taona 2009 hatrany
Xserve hatramin'ny fiandohan'ny taona 2008 na taty aoriana
Ny lisitra Mac izay TSY mifanaraka na dia amin'ity rafitra ity aza fametrahana Izy ireo dia:
2006-2007 Mac Pro, iMac, MacBook Pro ary Mac Mini
Ny 7,1 iMac2007 ihany no tohanana raha toa ka navaozina ny CPU ho lasa Core 2 Duo monina any Penry, toa ny T9300
MacBook4,1 -MacBook Air hatramin'ny 2008 (MacBookAir1,1)
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fananana ilay fitaovana Patcher Tool hita ao amin'ny boky torolàlana sy ny famaritana horonan-tsary. Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao na manana ny dingana akaiky, dia azonao atao ny mijery ny tranokalan'ny mpamorona izay hahitanao azy amin'ny antsipiriany ity boky fampianarana ity. Ankehitriny dia manana ny zavatra rehetra ilainao ianao mba hahitanao ny Mac tsy tohananao amin'ny macOS Mojave ary ianao no hiandraikitra ny fanapahana hevitra raha mendrika ny hanao an'io fametrahana io na tsia.
Ny zavatra holazainay momba ity fizotran'ny fametrahana macOS Mojave ity dia izany tsy natao ho an'ny mpampiasa mac rehetra io Satria dingana fametrahana izay tsy tsotra ary mety tsy mandeha tsara ihany koa amin'ny Mac izany noho ny olana mifanaraka amin'ny sary, mety misy tsy fahombiazan'ny fifandraisana WiFi, ny Bluetooth, ny tsy fahombiazana amin'ny trackpad na mitovy Ity dia zavatra iray izay ampitandreman'ilay mpamorona sy mpamorona ny tutorial fa tsy izany no tokony hiverina eto amintsika raha misy tsy fetezana mitranga ao amin'ny macOS Mojave.
Etsy ankilany, tsy manoro hevitra ny fametrahana fitaovana ilaina amin'ny fampiasana isan'andro, asa na mitovy amin'ny voalaza etsy ambony aho. Voalohany indrindra milaza fa ankoatry ny fametrahana fametrahana firaisana tsikombakomba kokoa noho ny mahazatra dia mety tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ny Mac avokoa ny zava-drehetra raha tsy misy ny fanohanana ny macOS Mojave. Andraikitry ny tsirairay ny manatanteraka ny fametrahana na tsia ary ny ekipan'ny Soy de Mac dia tsy tompon'andraikitra amin'ny olana mety hitranga amin'ny fametrahana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fametrahana macOS Mojave amin'ny Mac "tsy manohana"
Josep Perez dia hoy izy:
Misaotra indrindra tamin'ny anjara birikinao.
Manaraka ny dingana napetrako Mojave ao amin'ny iMac 12,2 ary ny fomba dia niasa, fa aorian'ny famerenana indray dia asehon'ny efijery fa niova ny lokony rehetra.
Heveriko fa tsy maintsy misy tsy fitoviana mifanaraka amin'ny sary an-tsary momba ny solosaina.
Afaka mieritreritra vahaolana ve ianao?
Valiny tamin'i Josep Pérez
Mety ve ny fanontaniana? ary very fampisehoana be dia be? Satria rehefa manavao, ankoatry ny fampitandremana antsika fa mety tsy hahomby izy io ary tsy maintsy manomboka hatrany am-boalohany dia tsy misy resaka fampisehoana
Napetraka tao amin'ny Imac aho nanomboka ny tapaky ny taona 2010 ary niova ny loko ary ratsy ny sary. Ny famindrana ny varavarankely dia manidy azy ireo.
Salama Manana olana mitovy amin'izany aho. Niova ny loko ary nanjavona ny mena. Misy vahaolana ve?
Ao anatin'io olana io ihany aho, nahita vahaolana ve ianao?
pikuko dia hoy izy:
Manatevin-daharana aho, mitovy amiko ny mitranga amin'ny hafa manana loko
Mamaly an'i pikuko
Napetrako tamin'ny faran'ny taona 2009 MacBook Unibody ary tena mandeha tsara izy io. Nametraka azy io tamin'ny MacBook Air 2010 ihany koa aho, ary mety tsara ihany koa. Efa nasianao paty ve ireo safidy napetraky ny mpamorona patch ho an'ny maodely tsirairay amin'ny faran'ny fametrahana?
Eny, miasa izy, tsy mandeha tsara, miankina amin'ny fampiasana omenao azy, mety aminao daholo na tsia. Mihisatra be izy io, amin'ny andro voalohany dia nianjera ihany koa ny rafitra. Tsy mandeha amin'ny fitoviana, na virtualbox ihany koa, raha tsy Windows XP. Tsy maintsy niverina tany amin'ny OS X El Capitan aho ary tonga lafatra indray ny zava-drehetra, na izany aza misaotra, mila manandrana ianao. MacBook Pro 17 ″ 5,2 Mid 2009. SSD 8GB an'ny RAM no tena afaka manome fitaovana azy. Eritrereto izany alohan'ny hametrahana azy. fiarahabana
MacBook Pro 13 »faran'ny 2011,
Sary: Intel HD sary 3000 512 MB,
Mpikirakira: 2,4 GHz Intel Core i5
16gb ram sy ssd.
Napetraka tsy misy olana, fa izay nolazain'ny mpampiasa hafa, miaraka amin'ny patch amin'ny graf dia tsy hitako akory. Fa raha miadana kokoa ny pc, ny boaty virtoaly ary ny programa fampandrosoana na famolavolana hafa, dia tsy holazaiko anao akory izany.
Tena tiako ilay lohahevitra maizina natolotr'izy ireo tao Mojave, saingy, tsy mendrika ho ahy ny miasa isan'andro amin'ny mac, tsy dia voaatsara loatra izany, ho an'ny solosainako.
Fandraisana anjara lehibe ho an'ny mpamorona patch +1!
Ruben Reyes dia hoy izy:
Misaotra ny fandraisana anjara.
Ampidiro Mojave amin'ny Macbook pro 2011, modely 8.2. tsy misy fahasarotana lehibe. Nanaraka ny fomba fanabeazana patch aho. Na izany aza, ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hanao izany, aorian'ny fametrahana mojave dia tsy hanomboka izany fa tsy maintsy manomboka amin'ny usb amin'ny alàlan'ny fametrahana azy izy ireo ary mihazakazaka ny patch, eo am-baravarankely no misokatra eo amin'ny ilany havia ambany. Eo izy ireo dia mitady ny maodelin'ny Mac-nao ary mampihatra ilay patch mitovy aminy. Eny tokoa, amin'ny tranga maodeliko, ny sary radeon natokana dia tsy mandeha haingana. Niezaka ny nametraka farany fanapahana pro kinova 10.4.5 aho ary milaza fa tsy tohanana ny sary. Na izany aza, manaraka tutorial hafa avy amin'ity developer ity ihany dia najanoko ny sary radeon sy ny voila miaraka amin'ireo sary mitambatra izay intel hd 3000, Final cut pro, miasa tsara ny kinova farany. Fa eny, rehefa tsy mandeha ny sary natokana dia tsy mandeha na mijanona ny fanaraha-maso ny famirapiratana rehefa manidy ny sarony. Iray hafa. Ho famaranana, ny zava-drehetra dia miasa afa-tsy izay nolazaiko, azonao atao ny mamela azy tsy hanafoana ny sary fa ny programa toa ny fanapahana farany izay mila fanafainganana dia tsy mandeha. Ny hafa toa ny lojika pro x miasa tsara ary tsara be ny fampisehoana, tsara folo heny noho ny nofy ratsy an'i High sierra izay tsy niasa tamim-pahalalana vidy mihitsy tamin'ny solosainako.
Valiny tamin'i Rubén Reyes
José Carlos dia hoy izy:
MacBook Pro tapaky ny taona 2009
Tena mandeha tsara. Voavaha ny olan'ny loko amin'ny alàlan'ny fanesorana ny safidy mangarahara amin'ny safidin'ny efijery fidirana.
Ny hany zavatra tsy mandeha dia ny fakantsary iSight izay voatanisa ho tsy hita.
Tena malama ny fampisehoana, angamba satria ny sary an'ity maodely ity dia nVidia fa tsy ATI. Ny sisa amin'ireo singa dia tsara.
Valiny tamin'i José Carlos
Alexander ,. dia hoy izy:
Carlos, misy tolo-kevitra ho anao hanomezana anay tutorial momba ny fomba fanaovana azy? Tsy afaka miditra amin'ireo sary amin'ny Final aho. Mihazakazaka be ny photosho fa tsy hitako ny sary amin'ny programa fanovana.
Valiny tamin'i Alejandro,.
Ilay Dude dia hoy izy:
Ahoana no fomba fampidinana anao ny rakitra fametrahana? Ao amin'ny AppStore dia milaza amiko izy fa tsy tohanana izy io ary tsy mamela ahy hisintona.
Mamaly an'i The Dude
Okay. Vao hitako fa azo sintonina miaraka amin'ny patcher izy io
ECM dia hoy izy:
Manana macbook pro 2011 aho, 13 ″ santimetatra tamin'ny voalohan'ny 2011
Fahatsiarovana: 8GB 1333 mH3 DDR3
Sary: intel HD sary 3000 512 MB
Te hahafantatra aho raha afaka manova ny maverick mankany mojave? Ary raha azony atao, ahoana no hatao raha tsy misy misintona azy avy amin'ny App Store ???
Valio ny ECM
Salama, ny ambony indrindra azonao apetraka amin'ity solosaina ity araka ny Apple dia:
Aorian'ny fampianarana ny lahatsoratra, tsy haiko raha afaka mandefa Mojave amin'io ekipa io ianao, na dia tokony hanao izany aza ianao
Tena mety amiko izany! Amin'ny rivotra Macbook antenantenan'ny 2011 Core i5 sy 2G avy any Ram.
Miasa ny paty ampiharina ary milamina ny zava-drehetra, tsara kokoa noho ny avo sierra
Valiny tamin'i Benjamin
Jachs dia hoy izy:
Ahoana no fomba fisintomana kopian'ny Mojave?
Valiny tamin'i Jachs
Raha manaraka ny tutorial dosdude1.com ianao dia tsy ho resy. Azonao atao koa ny miala ao Mojave avy any.
Ampiasako izany amin'ny MacBook Pro 2009 (16 Gb RAM sy SDD) tamin'ny taona XNUMX ary ny marina dia tsy misy olana lehibe. Mila milaza aho fa tsy mampiasa Office na Photoshop na zavatra toy izany. Ho an'ireo fiara kely mandeha amin'ny birao izay mety ilaiko dia manana programa Google ao anaty rahona aho, miaraka amin'izay sisa tavela amiko.
Na izany aza, manana fanontaniana hapetraka aho: miverimberina milaza amiko fa mila manavao ny Big Sur, izay tsy tiako hatao, farafaharatsiny mbola tsy. Ary manana fisalasalana lehibe aho fa afaka manomboka io. Saingy amin'ny tsy fanekeko ity fanavaozana ity dia tsy mamela ahy hisintona ireo fanavaozana sisa hahaliana ahy (patch ho an'ny Mojave, fanavaozana ny Printer sns ...). Misy sosokevitra ve?
tvOS 12.0.1 dia misy amin'ny mpampiasa rehetra izao
Ny Alto's Adventure mahafinaritra dia hita ao amin'ny Mac App Store